JEAN NIRINA RAFANOMEZANTSOA: “Tandindomin-doza indray ny sosialim-bahoaka noho ny covid-19” – Madatopinfo
Niteraka fiantraikany goavana manerana ny firenena maro ny valaretina Coronavirus, isan’izany isika teto Madagasikara. Tsikaritra somary goragora anefa ny fepetra hiadiana amin’ity areti-mandoza ity eny anivon’ny fiaraha-monina eny amin’izao fotoana izao. Manoloana izany indrindra, manaitra ny olompirenena tsy ankanavaka ny FITRAMA (Fitsaboana Tradisionela Malagasy) ny amin’ny hijerena ireo lesoka nahatonga my fiparitahan’izany teo aloha. “Nandray anjara sy nanampy betsaka tamin’ny fandalovan’ny Covid-19 teto Madagasikara ny fitsaboana netim-paharazana ka tsy azo tsinontsinoavina. Vahaolana mahomby iadiana amin’ity aretina ity araka izany ny fampiakarana ny hery fiarovana amin’ny alalan’ireo vokatra natoraly sy ny fihanana sakafo ara-pahasalamana voajanahary”, hoy i Jean Nirina Rafanomezantsoa, Filohan’ny mpitsabo Malagasy FITRAMA. Isan’ny vahaolana aroson’izy ireo ihany koa ny tokony hijerena ny vata fampangatsiahana, ny ankamaroan’ny olona mararin’ny Coronavirus nanatona ity toeram-pitsaboana ity mantsy dia vokatry ny fisotroana sy fihinanana sakafo nampangatsiahana avokoa. Ka izany dia mitarika tranga misy fahasarotana eo amin’ilay marary raha tsy voatsabo ao anatin’ny ora vitsy. “Ankoatra izay, faniriana ny tsy hahatongavana amin’ny fihibohana tanteraka intsony ho antsika eto Madagasikara satria hitera-doza izany indrindra ny lafiny ara-tsosialy, mba tsy hisy ny fanararaotana isan-karazany tahaka ny vidin’ireo sakafo ilaina amin’ny andavanandro”, hoy ny hatrany ny fanazavana. Isan’ny fepetra noraisin’ny FITRAMA ihany koa ny fanamafisana ny ady amin’ny Covid-19 manerana ny Nosy, ao antin’izany i Morondava izay nahitana tranga maromaro tato ho ato. Ny Fitsaboana Tradisionela Malagasy moa dia manana fanafody hiadiana amin’ity areti-mandoza ity ary vonona hatrany izy ireo ny handray an-tanana ireo marary. Na dia izany aza, tsy tokony tsinontsinoavina hatrany ireo fepetra hatramin’izay, hoy i Jean Nirina Rafanomezantsoa.